पाथीभरा माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् आज २०७६ साउन २८ गते बुधबारको राशिफल Canada Nepal
समुद्रको पानी यस कारण भयो नुनिलो र खरो
काठमाडौँ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो समुद्रको पानी नुनिलो र खरो हुन्छ भनेर, आखिर किन समुद्रको पानी नुनिलो र खरो भएको, यसलाई शिव पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। एक चोटि माता पार्वती भगवान् शिवलाई पाउन भनेर कडा तपस्या गरिरहेको थिइन्। तपस्याको तेज यस्तो भयानक थियो, जसले स्वर्लोकको सिंहासन बसिरहेका देवी देवताहरू त्रसित हुन थाले र यस समस्याको समाधान खोज्न कोसिस गर्न थाले।
त्यसै क्रममा, समुद्र देवता पार्वतीको त्यस्तो तेजस्वीरुप देखेर मोहित भए। जब माता पार्वतीको तपस्या पूर्ण भयो, समुद्र देवले उनीसँग विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरे र पार्वतीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखे। जुन कुरा सुनेर, माता पार्वतीले समुद्र देवलाई आफूले कैलाश पति भगवान् शिवलाई माया गर्ने र उनै शिवलाई आफ्नो पति परमेश्वर मानिसकेको बताइन्।
समुद्र देवले सो कुरा सुने पछि, क्रोधित हुँदै भगवान् शिवलाई अनेकौँ गाली गर्न थाले र भने, "म सबै मनुष्य तिर्खा मेट्छु, मेरो चरित्र दूध जस्तै सेतो छ, म मा नहुने त्यो आदिवासीमा शिवमा के छ त्यस्तो' भन्दै पार्वतीसँग विवाह प्रस्ताव स्विकार्न कर गर्न थाल्छन् ।
भगवान् शिवलाई यस्तो भनेको सुनेर पार्वतीले आफ्नो क्रोधलाई सहन सकिनन् र समुद्र देवलाई तिमीले आफ्नो पानी मिठो भएकोमा घमण्ड गर्दैछौं, अब उपरान्त तिम्रो पानी नुनिलो हुनेछ भन्दै श्राप दिन्छिन् । नुनिलो पानीको कारण,कोही मनुष्यले तिम्रो पानी पिउने छैनन्।
पार्वतीको उक्त श्रापले गर्दा समुद्रको पानी नुनिलो तथा खरो भएको हो। त्यसैगरि, अनेकौँ पौराणिक कथाअनुसार समुद्रको पानी नुनिलो हुनुको कारण समुद्र मन्थन पनि भएको उल्लेख गरिएको छ।
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १५:४५:१५ बजे : प्रकाशित
# समुद्रको पानी
# नुनिलो र खरो
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १२:५९:२७ बजे : प्रकाशित
बिक्रमबाबाले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! हेर्नुहोस् आज २०७७ असोज ९ गते शुक्रबारको राशिफल
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार ०७:१०:३६ बजे : प्रकाशित
यसरी बितेको थियो स्वामी विवेकानन्दको बाल्यअवस्था
काठमाडौँ। विवेकानन्द, एक भारतीय हिन्दू भिक्षु थिए । उनी १९औं शताब्दीका भारतीय गुरु रामकृष्णका प्रमुख शिष्य थिए। पश्चिमा देशहरुमा वेदान्त र योगको दर्शनको परिचय दिने उनी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वा पात्र हुन् ।
कलकत्ताको कुलीन बंगाली कायस्थ परिवारमा जन्मेका विवेकानन्दको सानै उमेरदेखि आध्यात्मिकतातिर झुकाव थियो। उनी आफ्ना गुरु रामकृष्णबाट निकै प्रभावित थिए। जसबाट उनले सबै जीवित प्राणीहरू ईश्वरीय आत्माको मूर्ति हुन्, त्यसकारण मानव सेवामा परमेश्वरको सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो ।
उनको बाल्यकालको एक रोचक घटना एकचोटीको कुरा हो, जब स्कूलमा ब्रेकको समयमा कक्षा कोठामा विवेकानन्द आफ्नो साथीहरुसँग खुब गफगाफ गर्दै थिए । त्यति नै बेला शिक्षक कक्षामा आए । सबै अरु छात्रछात्राहरु चुपलागे, तर विवेकानन्द भने आफ्नै शुरमा गफ गरिरहेका थिए ।
यो देखेर शिक्षक निकै क्रोदित हुँदै गफ गर्ने सबै विद्यार्थीहरुलाई पढाएका प्रश्नहरु सोध्न थाले । तर, कसैले त्यस प्रश्नको सही जवाफ दिन सकेनन र अन्तिममा विवेकानन्दलाई उठाएर एक पछि अर्को प्रश्न सोध्न थाले । शिक्षकको प्रश्नको सबै सहि उत्तर दिएका विवेकानन्दलाई देखेर शिक्षक आफैँ छक्क परे ।
उनले सानै उमेरमा संस्कृत, व्याकरण, रामायण र महाभारत कण्ठस्थ गरेका थिए। उनको बाल्यकालको नाम नरेन्द्र थियो । उनी बच्चाबेला निकै चक्चके थिए । जसकाकारण उनकी आमा भुवनेश्वरी देवीले उनलाई शान्त पार्न चिसो पानीमा उनको टाउको डुबाई ’ओम नमः शिवाय’को जाप गर्न लाउँथिन्।
उनलाई पशुपंक्षीहरु प्रति निकै मोह थियो, जसकाकरण उनले घरमा गाई, बाख्रा, बाँदर, मयुर र अरु थुप्रै पशुपक्षीहरु पालेका थिए । सानै उमेरदेखि उनलाई साधु सन्तहरुमा निकै लगाव थियो र तिनीहरुलाई देख्ने वित्तिकै उनमा धेरै उत्साह हुने गर्दथ्यो ।
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १३:०९:३३ बजे : प्रकाशित
# स्वामी विवेकानन्द
भद्रकाली माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल असोज ८ गते बिहिबारको राशिफल
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार ०७:२९:२० बजे : प्रकाशित